CyberGhost VPN Crack 2021 - Kaody Fampandehanana Maimaim-poana
Photo Retouching Services > Retouching Blog > Malagasy Blog > CyberGhost Crack
Maninona ny CyberGhost VPN Crack no iray amin'ireo fangatahana mifandray amin'ny VPN malaza indrindra? Izany dia satria CyberGhost dia manana mpizara mihoatra ny 5900 any amin'ny firenena 90 mahery sy mpampiasa 30 tapitrisa mahery, ary koa foibe fitahirizana angona sy fikirakirana NoSpy.
CyberGhost VPN maimaim-poana
Ireo manampahaizana manokana momba ny serivisy ihany no mahazo miditra amin'ireo mpizara, izay manome fiarovana azo antoka amin'ny angon-drakitra sy ny fanelingelenana ataon'ny antoko fahatelo. Ny orinasa dia namolavola fampiharana ho an'ny rafitra fiasa samihafa, anisan'izany ny fitaovana finday (Windows, Linux, macOS, iOS, Android), rafitra TV (Amazon Fire, Fire Stick, Android TV), ary ny router.
Ankoatr'izay, fitaovana hatramin'ny 7 no azo ampifandraisina amin'ny kaonty CyberGhost VPN iray miaraka, izay tsy azo atao raha mampiasa CyberGhost cracked kinova. Ho fanampin'izany, manolotra fanitarana maimaimpoana ho an'ny mpizaha malaza ny mpamorona - Google Chrome sy Firefox.
Manome mpizara 8 mpizara ao amin'ny firenena 4 izy (Alemana, Netherlands, Romania, Etazonia).
CyberGhost VPN Endri-javatra:
Politika henjana tsy misy fisoratana anarana
Betsaka ny mpamatsy VPN no milaza fa tsy mila misoratra anarana ny mpampiasa azy vao afaka mampiasa ny serivisy. Na izany aza, raha mandinika tsara ny Fepetran'ny Serivisy ataon'izy ireo ianao dia ho azonao fa tsy marina izany. Be dia be Serivisy VPN soraty ny angonao fa tsy CyberGhost.
Ny serivisy streaming dia manao izay azony atao hanakanana ireo adiresy IP an'ny mpizara VPN sy hifehezana ny fidirana amin'ny atiny. Na izany aza, VPN Ghost dia manaporofo hatrany ny fomba ampiasan'ny serivisy azy. Tena manome fidirana amin'ny atiny rehetra ilainao ity serivisy ity.
DNS anao manokana
Rehefa eo amin'ny Internet ianao dia omen'ny mpamatsy Internet ny mpizara DNS anao. Tsy tsara amin'ny fiainanao manokana izany. Na izany aza, afaka mamaha mora foana an'ity olana ity ianao amin'ny fanovana tsotra fotsiny ny DNS. CyberGhost dia manana DNS anao manokana izay azonao ampiasaina.
Haavo ambony amin'ny encryption
Ny servers dia namboarina sy namboarina ho fiarovana tsara indrindra amin'ny fifandraisana, na inona na inona karazana fitaovanao. Ohatra, rehefa mampifandray amin'ny iPhone, CyberGhost dia mampiasa ny fomba enkripsi enti-teraka teratany IKEv2. Raha mampiasa VPN amin'ny Raspberry PI miaraka amin'ny Linux ianao, OpenVPN no ampiasaina.
processeur 1 GHz PC 32-bit (x86) na 64-bit (x64) processeur
ram 2 GB (miankina amin'ny rafitra miasa Windows anao)
Storage 310 Megabyte habaka kapila mafy (280 MB latsaka, raha efa napetraka ny Microsoft .NET 4.6)
Fanapahana ny efijery 1024 x 600-pixel, Loko avo na Loko Marina
Anaran'ny fisie: CyberGhost_7.3.7.4778.exe (Download)
Anaran'ny fisie: CyberGhost-7.1.0.92.pkg (Download)
Anaran'ny fisie: CyberGhost.apk (Download)
Anaran'ny fisie: CyberGhost.ipa (Download)
Filesize: 112,4 MB